ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်ရှေ့မှာ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး မရှိဘူးဆိုတာ ဆန္ဒပြ
အမေရိက ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်ရှေ့မှာ
ရခိုင်လူမျိုးတွေ အပါအ၀င် -၈၈- ကျောင်းသားတွေ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေ
ဒီကနေ့၃၀-၆-၂၀၁၂ - နေ့ လည် --၂-နာရီကနေပြီး ညနေ -၅- နာရီထိ ဆန္ဒပြခဲ
ရခိုင်လူမျိုးတွေ ကရင်လူမျိုးတွေ လာကြတယ် ။ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေက အခုလို ဆန္ဒပြတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ
သမိုင်းလိမ် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဆိုတာ မရှိဘူးဆိုတာ
ဆန္ဒပြထုတ်ဖေါ်ကြတာဖြစ်တယ် ။ အခန်အးနားမှူးအဖြစ် ကိုဘခင်ကဆောင်ရွက်ပြီး
ဦးခိုင်အောင်ကျော် နဲ့-၈၈- ကျောင်းသား ကိုရဲထွတ် ( IFBNC )
ဒါရိုက်တာတို့ က အသီးသီး ဟောပြောကြပြီး ဆန္ဒပြပွဲလာသူတွေကလည်း သူတို့ ရဲ့ 
တယ် ။ ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ
့အခန်အနားနဲ့ ပါတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာတော့ သမိုင်းလိမ်
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေသာ ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး
ကြေညာထားသလို ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို ကယ်တင်ကြဖို့ 
အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ် ရှိကြဖို့အခုအချိန်မှာ
အထူးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်း ကြေညာထားပါတယ် ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/30/20120အကြံပြုခြင်း
he Voice Weekly
— ညီညွှတ်ခြင်း နှင်းဆီ
Click here 58 more photos
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/30/20122အကြံပြုခြင်း
အင်္ဂလန်က ဒေါ်စုကြိုဆိုပွဲကို ကုလား ပရိုးမိုးရှင်းပွဲဖြစ်အောင် လုပ်သွားတဲ့ ဒီပွဲကြီးက သာမန်ဇတ်ကတဲ့ ပွဲမဟုတ်ပါ။
ဘုန်းတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးများသာ​မက ရှေ့မှီနောက်မှီ လူကြီးသူမတွေက ၂၄ နှစ်ကြာ
အထူးစောင့်မျှော်နေတဲ့ပွဲ။ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံး​စံ ကိုဖေိာထုတ်ပြသတဲ့ပွဲ။ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် အင်္ဂလန်ရှိ
ဆရာတော်ကြီးတွေကရှေ့ဆုံးတန်းမှာ​ထားပါ။ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပွဲကို သူကိုယ်တိုင်ဘာသာရေးလေးစားသူပီပီ အထူးမျှော်
လင့်နေကို သိသိရဲ့နဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ခေါင်းညှိတ်ပြပြီး စင်ပေါ်ခေါ်မလိုလို နဲ့ ဇာဂနာ့နားတိုးသွားပြီး သူတို့နှစ်ယောက် "
အမေစု" ခေါ်လိုက်ကြရအောင်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပြီး သိသိသာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို ကျောခိုင်းလိုက်တာ ဘုန်းကြီး
ဦးဥတ္တရနဲ့ မြောင်းမြဆရာတော်ကြီး ရယ် အခြားဆရာတော်တွေ ရှက်ရှက်နဲ့ ပြန်ထိုင်လိုက်ရတာ မျက်စိရှိသူတိုင်းတွေ့ခဲ့ကြရတယ်​။
Online အခွေတွေမှာလည်း ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်ကြည့်ကြပါ။ Original အခွေမှာ လူတိုင်းမြင်တွေ့ နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဖြတ်ညှတ်ပြစ်ရင်လည်း
မဖြူပြာဆီမှာရှိပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ မေတ္တာဆုတောင်းပွဲက ၃မိနစ်ပဲယူထားတာ၊
ဒီလောက် နိုင်ငံအတွေက် အရေးကြီးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီကဏ္ဍ ကို ရအောင်ဖျောက်ဖျက်ပစ်တယ်ဆိုတော့ ဒီ လူတွေဟာ
ဘာသာခြားတွေဖြစ်နေပြီလား။ ဦးခွန်ဆိုင်းကပါ မလောက်လေးမလောက်စား ဘော်လုံးပွဲ
လောင်းတာလောက်နောက်တောက်တောက်ြေ​ပာင်တောင် ရေးနေတယ်။ ခံစားခဲ့ရတဲ့
လူကြီးတွေ၊ အခြားဘုန်းကြီးတွေက ဒီလိုသမိုင်းဝင်ပွဲကြီး မှာ ဒီလိုလုပ်ရက်ကြလေခြင်းဆိုပြီး ရင်ထုမနာဖြစ်ကြတာကို ရှင်တို့၊
ထိန်လင်းတို့ကသာ ပြီးပြီးရော ချော်လဲရောထိုင်လုပ်သလို၊ ဗုဒ္ဒဘာသာ မဟုတ်တော့သလိုလို ရူးချင်ယောင်ဆောင်ချင်လို့ရချင်​ရမယ်။
ကျန်တဲ့အစော်ကားခံရသူ ၂၅၀၀ ကျော်ကတော့ တသက်စာ မမေ့တောဖူး။ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို မလေးစားတဲ့ အပြင်
စင်ပေါ်တက် စော်ကားရဲတဲ့သူတွေဟာ ငရဲပြည်ကို ဘုံပေါက်နေပါပြီင်္။ (သူတော်ချင်းချင်း၊ သတင်းလွင်လွင့်လေ။ ဒေါ်စုဘေးက
သက်တော်စောင့် မောင်အောင် ယောင်ဆောင်ပြီး ကိုအောင်(၈၈) ဖြစ်လာတဲ့ အောင်ကျော်စိုး ဇတ်ပျက်နဲ့ ပေါင်းလုပ်ကြတာကိုး။
ဒါတောင် ဒေါ်စုက သူတို့ ဇတ်တိုက်ပြီးဖိတ်တဲ့ လန်ဒန်မှာ ဘားမားကန်ပိန်း (ယူကေ) ပံပိုးမှုတွေနဲ့ အသက်ရှင်လာတဲ့ နူရူးအစ်စလာမ်၊
ထွန်းခင် တို့ ရိုဟင်ဂျာနှစ်ဖွဲ့ပါပါတဲ့ ညစာစားပွဲကို ငအောင်နှင့် ဒင်းတို့ စီစဉ်တာ ကံကောင်းလို့ ဒေါ်စုက ပါးပါးနပ်နပ် ငြင်းခဲ့ပေလို့။
ဒီတော့ စင်ပေါ်မှာ ရထားတဲ့ အခွင့်အရေးကို အလွှဲသုံးစား လုပ်ချပြီး ဒေါ်စုကို
မူဆလင်ဘာသာထဲဝင်ပါလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါမကျန် မေးခွန်းတင်ပေးလိုက်ပုံကို ဒေါ်စုနောက် ဇာဂနာ ဝင်ဝင်ပုန်းပြီး
သူတို့တိုင်ပင်ထားခဲ့မေးခွန်းတွေကို ရွေးရွေးပြီး တင်ပေးနေတာ ပွဲကြည့်သူတိုင်း မြင်တာပဲ။ အခု VCD,
DVDအခွေတွေမှာ ပြန်ပြန်ကြည့်လည်း တန်းနေအောင်မြင်ရတာပဲ။ အစထဲက အခြား ဘာသာတွေကို ပါ အလေးထားပြီး ဒီပွဲမှာ
ဘုန်းတော်ကြီးတွေ မေတ္တာပို့မဲ့ ကဏ္ဍကို ဖြုတ်မယ်လို့ ပြောကြည့်ပါလား၊ ဒေါ်စုကလာတောင်လာမှာ မဟုတ်ဖူး။ ရှင် တို့က
ဘာသာခြားနေပြီ(သို့) ဘာသာပျက်နေပြီမို့လို့ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ ဒီကဏ္ဍကို အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို
မစောင့်ရှောက် နိုင်ခဲ့တာပေါ့။ အရှက်မရှိ လျှောက်ဖြေရှင်းမနေပါနဲ့ တော့။ ရှင့်ရဲ့ စမ်းချောင်းက ဗုဒ္ဒဘာသာဝင် မိဘတွေဆီ
နားပေါက်သွားရင် ရင်ထုမနာ ဖြစ်နေပါဦးမယ်။ ကိုယ့်စကားကို ကိုယ်တာဝန်ယူပါတယ်။
(မဖြူပြာ - ၃၀.၀၆.၂၀၁၂)
”ကုလားမယား စုကြည် အလိုမရှိ”ဟူသောစာတန်းကိုင်ေ​ဆာင်ပြီးဆန္ဒပြနေသူသုံးဦး
အမေစုအား ရိုင်းပြစွာ စော်ကားသည့် ဆိုင်းဘုတ် ကိုင်ဆောင်သူအား ကြံ့ဖွတ် မှ ငွေကျပ် 1သိန်း ပေးကာငှါးရမ်းလုပ်ဆောင်စေသည်ဟု ၄င်းနှင့် နီးစပ်သူမှ ပြောကြားပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင်လည်း အမေစုအား ကြိုဆိုသည့် လူများကြားတွင် နေခိုင်းကြောင်း အမေစုကားလာမှသာ ဆိုင်းဘုတ်ကိုပြရဲကြောင်း ဒါမှ အမေစုကိုကြိုဆိုသောသူများပါ မိမိကဲ့သို့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူအဖြစ်မြင်ကြမှာဖြစ်ကြောင်း ၄င်းမှ ဆက်လက်ပြောကြားပါသည်။
လန်ဒန် အခြေစိုက် The Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK) အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးထွန်းခင်မှ ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ပူးပေါင်း သတ်ဖြတ်တဲ့ အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက် ဆူပူမူ အတွင်း ရိုဟင်ဂျာ ၆၅၀ သေဆုံးကြောင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ ပါလီမန် မြန်မာ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးဆိုင်ရာ ပါတီ ပေါင်းစုံ အဖွဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ လိမ်လည် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
Ethnic Rakhine Buddhists pass time inaBuddhist monastery used asacollective shelter for those displaced by recent violence in Sittwe. Photo: REUTERS ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ပါလီမန်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးဆိုင်ရာ ပါတီ ပေါင်းစုံ ဥက္ကဌ Baroness Kinnock ရှေ့မှောက်မှာ ခုလို ဦးထွန်းခင်က ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရွာပေါင်း ၂၂ ရွာမီးရှို့ ခံရပြီး လူပေါင်း ၁၂၀၀ ပျောက်ဆုံးကာ ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီ လူပေါင်း ၈၀၀၀၀ ထိ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ လိမ်လည် တင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဦးထွန်းခင်က ဒီပြဿနာကို ဖြစ်ပွားအောင် အစိုးရတွင်းက တင်းမာသူတွေနဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီက အကွက်ချ စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ဒီလို ဗြိတိန် ပါလီမန်မှာ ဦးထွန်းခင် လိမ်လည် ထွက်ဆိုနိုင်အောင် စီစဉ် ပေးသူကတော့ များမကြာမီက A friend’s appeal to Burma (မြန်မာနိုင်ငံသို့ မိတ်ဆွေတဦး၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်) ကို ရေးသားသူ CSW မှ Benedict Rogers ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား နောက်ထပ် ကူညီ ပေးသူတွေကတော့ ရခိုင်စီမံကိန်း ( Arakan Project) က Chris Lewa ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ Burma Campaign UK တို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင် ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူမှာ အစိုးရ စာရင်းအရ သေဆုံးသူ ၈၀ ကျော်ဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာ ရတဲ့သူက ၅၀ ကျော် ရှိတယ်လို့ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကျေညာထားပါတယ်။ သေဆုံးသူတွေထဲမှာလည်း ရခိုင်ဦးရေက တ၀က်ထက် ပိုများပါတယ်။ ဒီအရေအတွက်ကို နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုတွေကလည်း လက်ခံထားပါတယ်။
အခုလို လူပေါင်း ၆၅၀ ထိ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ ဗြိတိန် ပါလီမန်ထိ တက်ရောက်ပြီး လိမ်လည်တာဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်ရေးကို ပျက်ပြားအောင်၊ ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူကို ထပ်ဖြစ်အောင် နိုင်ငံခြားကနေပြီး သွေးထိုးလုံဆော်နေတာနဲ့ တူတယ်လို့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဦးလှစောက ပြောပါတယ်။ ခုလို အခြေအမြစ် မရှိတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ တင်ပြတာကို ဗြိတိန် ပါလီမန်က လက်ခံတာဟာလည်း အထူး ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
အခုအရေးအခင်းမှာ ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေဘဲ သေသေ၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဘဲ သေသေ အကုန်လုံးဟာ လူသားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ အတွက် ဒီလို သေကြေ ပျက်စီးမူကို ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီက မလိုလားဘူးလို့ ဘီဘီစီ (မြန်မာပိုင်း)နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဦးဦးလှစောက ပြောပါတယ်။
အခု ဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက် ဆူပူမူမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီ လူမျိုး တစ်ခုတည်းသာ သေဆုံး ဒုက္ခရောက်ကြတာ မဟုတ်ဘဲ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်း သေဆုံး ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေ သေဆုံး ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတာကို တခွန်းတပါဒမှ မပြောဘဲ ဗြိတိန်ပါလီမန်မှာ တဖက်သတ် လိမ်လည် ပြောဆိုတာကတော့ ကိုယ်ချင်းစာမဲ့ရာ ရောက်ပြီး အထူး ၀မ်းနည်း စရာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ဦးထွန်းခင်နဲ့ အပေါင်းအပါ တစ်စုရဲ့ လိမ်လည်တာကို ကမ္ဘာက သိအောင် ထပ်ဆင့်် ဖြန့်ဝေ ပေးတာကတော့ Burma Campaign UK ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဖြန့်ဝေတဲ့ စာကို အောက်မှာ ပူးတွဲ ဖေါ်ပြအပ်ပါတယ်။
The President of the Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK), Tun Khin together with Benedict Rogers (East Asia Team Leader, Christian Solidarity Worldwide) and Chris Lewa (Co-co-ordinator for Arakan Project) presented evidence of the persecution of Rohingyas in Arakan State atameeting in the British Parliament today. The meeting was chaired by Baroness Kinnock, Chair of the All Party Parliamentary Group for Democracy in Burma, and focused on the current crisis in Arakan State, Burma.
တနေ့ကတောင် အမေရိကန်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရသူ Ms Nuland က Rohingya State လို့သုံးနူန်းတာတွေ့လိုက်တယ်။ သူတို့လုပ်ရပ်တွေက ထိရောက်မူ့ရှိတယ်ဗျ။ ပိုက်ဆံတွေလိုသလောက်သုံးစွဲနိုင်ခဲ့လို့ဘဲ ဒီလိုအောင်မြင်မူ့တွေရတာပေါ့။ ဒီဗွီဘီ၊ဘီဘီစီ၊ဧရာဝတီတို့လို မြန်မာနိုင်ငံသားပုံရိပ်ရှိတဲ့အတိုက်အခံမီဒီယာတွေ စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတစိတ်တပိုင်းအဖြစ် ရိုဟင်ဂျာတွေကို စစ်အစိုးရကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အသုံးချခဲ့ရာကနေ အမေရိကန်၊ အီးယူ၊ ယူအန်အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုတွေ၊ အလူုရှင်တွေကပါ သနားကရုဏာသက်သွားလို့ ခုအခြေအနေအထိဖြစ်သွားရတာပါ။ ငွေပေးလို့ရနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိသလို တပြားမှမကုန်ဘဲနဲ့ အလကားကြော်ငြာပေးခဲ့ကြလို့ ရိုဟင်ဂျာတွေအမြတ်ထွက်သွားကြတယ်။
သိပ်မကြာခင်မှာ မြန်မာအစိုးရက ဒီဖြစ်ရပ်တွေကိုဖွင့်ချတော့မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ကေ့စ်တခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် အချိန်လိုပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အဖမ်းအဆီးတွေရှိနေတယ်။ အဓိကဇတ်လိုက်တွေဖြစ်နိုင်တဲ့ UNHCR တာဝန်ခံတွေ၊ အဲဒီဝန်ထမ်းတွေNGO အဖွဲ့တွေရဲ့ခေါ်တောဝန်ထမ်းတွေ၊ UNO, RSO,အယ်လကိုင်းဒါးနဲ့ဆက်စပ်မူ့တွေ၊ လက်နက်သိမ်းဆည်းမူ့တွေအပါအဝင် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသကို မူဆလင်ပိုင်နက်နယ်မြေ့ပုလုပ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေလဲပါနိုင်ပါတယ်။
မိုးရွာတာကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်၊ ခုပြသနာအေးသွားတာ မိုးရွာတာကပိုအဓိကကျပါတယ်။ တနေ့ကတောင် မောင်တောမှာ ရဲတယောက် သေနတ်အလုခံရသေးတယ်။ ဘယ်လောက်အတင့်ရဲသလဲ။ မြေပုံမှာလဲ သောက်သုံးရေကန်ကိုအဆိပ်ခပ်တယ်လို့ အလဲဗန်းသတင်းတက်လာတယ်။
လောလောဆယ် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတိုးတက်ရေးပါတီတင်ပြထားတဲ့ တတိယနိုင်ငံအစီအစဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ သူတို့ကို အမေရိကန်ကလက်ခံမလား၊ အော်ဇီလား၊ မလေးရှားမှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာနာမည်ခံဘင်္ဂလီတွေကိုတော အမေရိကန်က လက်ခံနေတယ်လို့ကြားရတယ်။ ရခိုင်ဘက်က ဘကုန်းတွေကိုလဲ အမေရိကကိုပို့လိုက်ပါ။ အဲဒီချိန်ကျမှ အမေရိကမှာRohingya State ပေးလိုက်ကြပေါ့။
The main ploblem is they are looking for own state ,own land..to separate new state from rakhine state .there are one million bingali porpulation in there.other step they asking for ethnics (native)group not even citizen. There arealot of muslim live in other parts of burma.We don't have any ploblem with religious.If they come to your country ,will you give them own land?
Guy!!!! go defense there in comments .
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/30/2012 1 အကြံပြုခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ယာဉ်တန်းအား အသရေဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစား
;လေဆိပ်မှ နေအိမ်သို့ပြန်လာသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ယာဉ်တန်းအား အသရေဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစားခဲ့သည် ။ လူငယ် ၂ ယောက် ပါသောတဖွဲ့ နှင့် ၃ ယောက်ပါ စုစုပေါင်း ၂ ဖွဲ့သည် ( ကုလားမယား အောင်ဆန်းစုကြည် ) စာတန်းအား ကိုင်ဆောင်ထားပြီး မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ် မြို့ အ၀င်ဆိုင်းဘုတ် နားတွင် တဖွဲ့၊ ရှစ်မိုင် လမ်းဆုံ မှတ်တိုင် အနားတွင် တဖွဲ့ မှ အဆိုပါစာတန်းအား ကိုင်ဆောင်ပြသကြသည် ။ ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံ အနီးမှ လူငယ် ၂ ဦး သည် ၎င်းစာတန်းကို ကိုင်ဆောင် ကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စီးနင်းလာသောမော်တော်ယာဉ်အနီး သို့တိုးကပ်လာသောကြောင့် လုံခြုံရေးလိုက်ပါသော တာဝန်ရှိသူမှ အဆိုပါလူငယ်အား တချက်ခန့် ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီး အသရေဖျက်သည့် စာတန်းအား သိမ်းဆည်းသွားခဲ့သည် ။ ထူးခြားသည်မှာအသရေဖျက်လိုသည့် လူငယ်၂ ဖွဲ့၏ စာတန်းများတူညီနေခြင်း ရှစ်မိုင်အနီးမှလူငယ် ၂ ဦး အနီးတွင် ထောက်လှမ်းရေး ၂ ဦး မှာ လမ်းလယ်မျဉ်းအနီးမှကင်မရာဖြင့်အသင့် စောင့်စားမှတ်တမ်းတင်နေခဲ့သောကြောင့် ကြိုတင် အကွက်ချ စီမံထားကြောင်း သိသာထင်ရှားစေသည် ။
.မြိုင်ဟေ၀န်နားမှာ လူသုံးယောက်က လမ်းမလယ်ကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြိုဆိုပါ၏ဆိုတဲ့စာရွက်ကိုကိုင်ပြီးကြိုနေရင်းကနေ ရှေ့ပြေးကားရောက်လာတော့စာရွက်ကိုတစ်ဖက်လှန်လိုက်တော့ အောင်ဆန်းစုကြည်ကုလားမယားလို့ရေးထားတာတဲ့အဲဒါ ရှေ့ပြေးယာဉ်ပေါ်ကလူတွေဆင်းလိုက်တော့ လူခွဲပီးပြေးကြရောတဲ့...
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
click here to See More 56 photos
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/28/20120အကြံပြုခြင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/28/2012 1 အကြံပြုခြင်း